Mpanamboatra sy mpamatsy fotodrafitrasa - Ozinina Infrastructure Shina
Ny boaty tatatra dia ampiasaina amin'ny fametahana hady ho toy ny endriky ny fanohanan'ny tany.Manolotra rafitra fametahana hady kely maivana izy ireo.
Cantilever Form Traveler no fitaovana lehibe indrindra amin'ny fananganana cantilever, izay azo zaraina ho karazana truss, karazana tariby, karazana vy ary karazana mifangaro araka ny rafitra.Araka ny fepetra takian'ny fananganana cantilever vita amin'ny simenitra sy ny sarin'ny Form Traveller, ampitahao ny endrika isan-karazany amin'ny endrika Traveller, ny lanjany, ny karazana vy, ny teknolojia fananganana sns., Ny fitsipiky ny famolavolana Cradle: lanja maivana, rafitra tsotra, matanjaka sy miorina, mora. Fivoriambe sy dis-assembly mandroso, matanjaka indray ny fampiasana, ny hery taorian'ny deformation toetra, ary be ny toerana eo ambanin'ny endrika Traveller, asa fanorenana lehibe ambonin'ny, mahasoa ny vy formwork asa fanorenana.
Namboarina sy novolavolain'ny orinasanay manokana, ny trolley tonelina hidradradradraina dia rafitra tsara indrindra ho an'ny fametahana ny tonelina amin'ny lalamby sy ny lalambe.
Motera sy maotera rafitra hery roa, fiara hydraulic tanteraka.Ampiasao ny herin'aratra hiasa, hampihenana ny entona setroka sy ny fahalotoan'ny tabataba, ary hampihena ny vidin'ny fanorenana;Ny herin'ny chassis dia azo ampiasaina amin'ny hetsika maika, ary ny hetsika rehetra dia azo atao amin'ny alàlan'ny switch power chassis.Fampiharana matanjaka, fiasa mety, fikojakojana tsotra ary fiarovana avo.
Ny trolley galera pipe dia tonelina naorina ambanin'ny tany ao amin'ny tanàna iray, mampiditra galeran'ny engineeringpipe isan-karazany toy ny herinaratra, fifandraisan-davitra, entona, hafanana sy rano ary rafitra fanariana rano.Misy seranan-tsambo fisafoana manokana, seranan-tsambo sy rafitra fanaraha-maso, ary ny drafitra, ny famolavolana, ny fananganana ary ny fitantanana ny rafitra manontolo dia natambatra sy nampiharina.
Ny fiara fametrahana andohalambo dia ahitana ny chassis fiara, outriggers eo anoloana sy aoriana, sub-frame, latabatra sliding, sandry mekanika, sehatra miasa, manipulator, sandry fanampiny, hydraulic hoist, sns.
Ny trolley tsy tantera-drano / Rebar work trolley dia dingana manan-danja amin'ny fiasan'ny tonelina.Amin'izao fotoana izao, ny asa tanana miaraka amin'ny dabilio tsotra dia matetika ampiasaina, miaraka amin'ny mekanika ambany ary misy lesoka maro.
Tonelina formwork dia karazana mitambatra karazana formwork, izay mitambatra ny formwork ny nariana-in-toerana rindrina sy ny formwork ny nariana-in-toerana gorodona eo amin`ny fototry ny fanorenana ny lehibe formwork, mba hanohanana ny formwork indray mandeha, mamatotra. ny bara vy indray mandeha, ary aidino ny rindrina sy ny formwork ho endrika indray mandeha.Noho ny endrika fanampiny amin'ity formwork ity dia toy ny tonelina mahitsizoro, izany dia antsoina hoe formwork tonelina.